भोक लाग्दा खाना नहुँदा लाइनमा बसेर माग्ने यी युवक आज बने १४ खर्बका मालिक, यसरि मिल्यो सफलता ! – Kavrepati
Home / अन्तरास्ट्रिय / भोक लाग्दा खाना नहुँदा लाइनमा बसेर माग्ने यी युवक आज बने १४ खर्बका मालिक, यसरि मिल्यो सफलता !
भोक लाग्दा खाना नहुँदा लाइनमा बसेर माग्ने यी युवक आज बने १४ खर्बका मालिक, यसरि मिल्यो सफलता !
admin August 14, 2021	अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 47 Views
सबैको मृत्यु हुँदा यिनै हुन् भाग्यले बाँचेका क्याप्टेन वरुण सिंह, जो यस्तो अवस्थामा फेला परे
हरेक सफल मानिसका पछाडि अनेकन दुःखका पहाड लुकेका हुन्छन् । उनीहरुको सफलताका पछाडि अनेकन हण्डर ठक्करका विराट कथा पनि लुकेका हुन्छन् । सानोतिनो मेहनतले मानिस सफल हुन सक्दैनन् । किनकी, शिखर चुम्ने कुरा आफैंमा सबैभन्दा ठूलो विषय हो । यस विषयलाई राम्रोसँग बुझेका मानिस आफनो जिन्दगीमा सफल हुन्छन् । उनीहरुले नाम र दाम समेत कमाउँछन् ।
कोही नामले मात्रै सफल हुन्छन् भने कोही नाम र दाम दुवैमा सफल हुन्छन् । सफताका कथा सुन्दा र पढ्दा त्यसले धेरैलाई खुसी नै दिन्छ । सफलत हुन झेल्नुपर्ने अनेकन हैरानीलाई पनि पचाउन सक्ने साहस पैदा हुन्छ । किनकी, मेहनतको बलमा खडा भएको साम्राज्य मात्रै लामो समयसम्म टिक्न सक्छ । त्यसले दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सक्छ ।
यस्तै, अनेकन दुःख र पीडापछि सफल भएका एक व्यवसायी हुन् जोमाटोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । उनले एक गाँस खानका लागि नै लामो लाइन बस्नु परेको थियो । खानका लागि पैसा हुँदैन थियो, सोही कारण उनले अनेकन दुःख पाएका छन् । एक सामान्य कम्पनीको आज कूल कारोबार अर्बौमा पुगेको छ । उनको कम्पनीको बजार मूल्यमात्रै भारु. १ लाख करोड बराबर पुगेको छ ।
भारतीय नागरिक र व्यवसायिक घरानाका लागि जोमाटो एक चीरपरिचित नाम हो । उक्त कम्पनी सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनपछि खडा भएको कम्पनी हो । अनलाइन कारोबार गर्ने सो कम्पनीले भारतीय नागरिकलाई घरमै बसेर अर्डर गर्ने बित्तिकै खाना आइपुग्छ । नेपालको हकमा भन्दा फुडमाण्डू, पठाओ फुड, भोज भने जस्तै हो । जहाँ तपाई घरमै बसेर पनि खाना मगाउन सक्नुहुन्छ । आजको समयमा शहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिस यस्तै खाना ल्याउने एपमा निर्भर रहेकाछन् । एक मामूली कम्पनी आज १ लाख करोड भारु बराबरको भ्याल्यू पुगेको छ ।
कम्पनीको काम बदलियो, तरिका बदलियो, र कम्पनीकै भाग्य पनि बदलियो । तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसको पछाडि एउटा यस्तो सोचले काम गरेको छ । एक सानदार आइडियाका कारण कम्पनी मात्रै सफल भएन, हजारौ मानिसलाई प्रविधिको माध्यबाट रोजगारी समेत दिएको छ ।
शुरुवाती चरणमा १० जनाबाट शुरु भएको काम आज हजारौमा पुगेको छ । उक्त सान्दार सोचको पछाडि एक भारतीय युवाको विराट सोच थियो । त्यो सोचका धनी थिए –दिपिन्द्रर गोयल र पंकज चड्डा ।
खाना पुर्याउने कम्पनी जोमाटोको सेयर भारतीय सेयर बजार बिएसइमा चढ्ने क्रममा रहेको छ । सो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ११५ भारु बराबर रहेको छ । जोमाटोको सेयर बजारमा सूचीकृत भए लगत्तै तिव्र गतिमा उकालो लागेको हो ।
कम्पनीको सेयर लगातार उकालो लागेर १३८.५० भारुमा कारोवार भउको थियो । कम्पनीको कूल बजार पूँजीकरण १ लाख करोडभन्दा बढी हुन पुगेको छ । कूल बजार पूँजीकरणका आधारमा हेर्दा सो कम्पनीको स्थान ४५औं स्थानमा रहेको छ । तिव्र गतिमा सेयर मूल्य बढ्ने केही कम्पनीमध्ये यो पनि एक हो ।
जोमाटो एक फूड एग्रिगेटर एप हो । जसमा तपाईंको आसपास रहेका कयौं होटल तथा ढावाको मेन्यू रहेको छ । उक्त मेन्यू कार्डबाट तपाईले आफूलाई मनपर्ने खाना अर्डर गरेर मगाउन सक्नुहुन्छ । यसबाट तपाईको समय बच्नेछ । तपाईलाई खाना खोज्न बाहिर निस्कनुपर्ने झण्झट पनि हट्छ । समयको वचत त छँदै छ, त्यसभन्दा बढी तपाईले खोजेजस्तै, रोजेजस्तै खाना तपाईको घर वा फ्याल्टमा आइपुग्छ । आज उक्त एपको करोडौं सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेका छन्् ।
जोमाटो शुरु गर्नुभन्दा पहिले यसको सोच दिपिन्द्रर गोयल र पंकज चड्ढाको हो । ुसन्् २००८ मा उक्त सोच पलाएको थियो । सो समयमा उनीहरुले एक रेष्टुरेन्ट तथा फूड लिस्टिङ बेवसाइटको रुपमा कम्पनी शुरु गरेका थिए । जसलाई फुडीबे नाम दिइएको थियो । आइआइटी दिल्लमिा रहने दुई संस्थापकको जब भेट भयो, उनीहरुले एक परामर्शदाता कम्पनीको नाममा एक फर्म दर्ता गरेका थिए ।
जोमाटोका संस्थापक दिपिन्द्रर गोयलको शुरुवाती पढाई खासै राम्रो हुन सकेन । सोही कारण उनी परीक्षामा अनुत्तिर्णसमेत भए । अनुत्र्तिण भएपछि उनले गम्भीरताका साथ पढाई गरे । सोही कारण उनले आइआइटीको परीक्षा उत्र्तिण गरे । उनले इन्जिनियरिङको परीक्षा उत्र्तिण गरेपछि काम खोज्न थाले । तर, काम पाउने कुरा सहज थिएन ।
सोही कलेजबाट पढाई सकेपछि उनले सन् २००६ मा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ कम्पनी बेन एण्ड कम्पनीमा काम शुरु गरे । नोकरीको दौरान सहकर्मीसँग खाजा खाने समयमा क्याफेटेरियाको मेन्यू कार्डका लागि नै लामो लाइन लाग्नु परेको समेत उनले देखे ।
सो समय उनको मनमा एउटा यस्तो विचार हो । उनले मेन्यू कार्ड स्क्यान गरेर बेवसाइटमा राखिदिए । उनले बेवसाइटमा राख्ने बित्तिकै सो मेन्यू असाध्यै लोकप्रिय पनि भयो । त्यसपछि उनले पंकज चड्ढासँग सो बारेमा कुरा गरे ।
कुनै समय जोमाटोले केवल आफनो बेवसाइटमा विज्ञापनको माध्यमबाट आफनो कमाई गरिरहेको थियो । नोभेम्बर २०१३ मा सिकोइया क्यापिटल कम्पनीले ३७ मिलियन डलर बराबरको फण्डिङको नेतृत्व गरेको थियो । सो समयमा दुई लगानीकर्ता, सिकोइया तथा हालका लगानीकर्ता इन्फो एजले जोमाटोको १५० मिलियन बराबरको मूल्यांकन गरे । त्यसपछि उनीहरु क्रमशः अगाडि बढीरहे र सफलताको शिखर समेत चुमे ।
कोही कसैलाई पनि यो विषय कल्पना भन्दा बाहिरको थियो । किनकी, उनीहरु यसरी अगाडि जालान् भन्नेमा कोही कसैले पनि शुरुमा पत्याएका थिएनन् । यो सफताको कथा एउटा दलित परिवारको व्यक्तिको थियो । किनकी, दलितलाई मानिस नै नमान्ने प्रचलन अझै पनि समाजमा व्याप्त छ ।
तर, जुन सफता आज प्राप्त भएको छ, त्यो अरुहरुका लागि समेत प्ररेणाको कथा हो ।क्लिक मांडू
Previous संक्रमित बढेपछि काठमाडौं उपत्यका लगाएत यी जिल्लाहरुमा लकडाउन गर्ने तयारी
Next मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिष्ठा र मर्यादालाई बिर्सिएर कार्यकर्ताहरु कार्यालय भित्रै नांचगान गर्दै टिकटकमा मस्त , हेर्नुहोस (भिडियो)
यो हो ‘इच्छा मृत्यु’ चाहनेहरुका लागि मेसिन: स्वीजरल्याण्डले ‘डेथ मेसिन’ लाई दियो कानुनी स्वीकृति, १ मिनेटै बिना पीडा हुन्छ मृत्यु
एजेन्सी । स्वीस सरकारले इच्छा मृत्युका लागि मेसिनको प्रयोगलाई कानुनी स्वीकृति दिएको छ । यो …